I-2.12 ngokwezifiso ze-interface-Geofumed
I-2.12 Ukulungiswa komsebenzisi
Ndiza kukuxelela into enokuthi uyayikrokra: i-Autocad isikhombisi singaguquzwa ngeendlela ezahlukeneyo ukulungiselela ukusetyenziswa kwayo. Umzekelo, sinokuguqula inkinobho ye mouse ukuqinisekisa ukuba imenyu yeemeko ayibonakali, sinokutshintsha ubungakanani besikhombisi okanye imibala kwisikrini. Nangona kunjalo, le ngenye yezo zinto zenzekile, kuba nangona utshintsho oluninzi lunokwenzeka, ngokuqhelekileyo ukucwangciswa okuzenzakalelayo kusebenza kakuhle kakhulu kubasebenzisi abaninzi. Ngoko ke ngaphandle kokuba ufuna ukuba inkqubo ibe neyona nto ikhethekileyo, siyintoni na ukuba siyihambe njengokuba kunjalo. Kukho nawuphi na, makhe sihlaziye inkqubo yokwenza utshintsho.
Imenyu yesicelo iqulethe iqhosha elibizwa ngokuthi "Khetha", evula ibhokisi yencoko apho singakwazi ukuguqula kuphela ukubonakala kwe-Autocad, kodwa kunye nezinye iiparameter ezininzi zokusebenza.
I-eye "eyehlokisayo" inamacandelo e-6 ehambelana ngqo nomboniso onkrini kwizinto esizidwebayo. Icandelo lokuqala liluhlu lwezinto ezibonakalayo kwifowuni yoqwalaselo olukhethiweyo. Kuloluhlu olukhankanyiweyo, kucetyiswa ukuba kucwecwe imivalo engqindileyo kunye neyoyiyo, kuba izixhobo "Zoom" esiza kuzifunda kwisahluko esifanayo zenze le miqobo ingadingekile. Ngaloo ndlela, ukhetho "Bonisa imenyu yesikrini" alukhuthazwa, kuba imenyu izuzwe kwiinguqu ezidlulileyo ze-Autocad esingazisebenzisi kulo mbhalo. Akunakuchukumisi ukuba utshintshe ifom ye "I-Window yokuLawula", engatshintshwa nge "Iifayili ...".
Ngenxalenye yayo, iqhosha elithi "Imibala ..." livula ibhokisi yencoko evumela ukuba sitshintshe umxube wombala we-Autocad interface.
Njengoko ubona, umbala omnyama we-Autocad umzobo wendawo uveza ukungafani nemigca ekhangelwe kakhulu, nangona xa sibadweba ngemibala engekho emhlophe. Isalathisi kunye nezinye izinto ezibonakala kwindawo yokudweba (njengemigqa yokukhangela eya kufundiswa kamva), nayo ibonakala ngokucacileyo xa sisebenzisa abamnyama njengemvelaphi. Ngoko, kwakhona, siphakamisa ukusebenzisa imibala engapheliyo yenkqubo, nangona ungaziguqula ngokukhululekile, kunjalo.
Omnye umzekelo wenguqu kwi-interface ye-Autocad yesikrini sibukhulu besirathisi. Ibha yokudlula kwibhokisi yencoko yababini iya kukuvumela ukuba uyiguqule. Ixabiso layo elingagqibekanga ngu5.
Ngenxalenye yalo, umfundi uya kukhunjulwa kwimimiselo esiye yabonisa ukuba xa iwindow yomyalelo yamcela ukuba akhethe into, ibhokisi elincinane libonwe endaweni yesalathisi esivamile. Yiyo, ngokuchanekileyo, ibhokisi lokukhetha, ubungakanani balo bunokuguqulwa, kodwa ngeli xesha kwi "Ukhetho" ithebhu yebhokisi ye "Izinketho" esiyihlolisayo:
Ingxaki apha kukuba ibhokisi ekhethiweyo enkulu ayivumeli ukuqonda ngokucacileyo into ekhethiweyo xa kukho izinto ezininzi esikrinini. Ngakolunye uhlangothi, ibhokisi elincinane kakhulu yokukhetha yenza kube nzima ukubonisa izinto. Ukuphetha? Kwakhona, yishiye njengoko kunjalo.
Ukuba yonke uxolo yethu ngayo akukho lula ukwenza utshintsho kujongano kunye nokusebenza AutoCAD eqinisekisa ngaye, ngoko, ubuncinane, funa amashiya "Profile" ibhokisi yencoko yababini, ngokusisiseko ikuvumela 2 izinto: 1) ugcine ezi nguqu phantsi igama elithile, ukuba iprofayili of izilungiselelo onokuzisebenzisa. Oku kuluncedo kakhulu xa abasebenzisi abaninzi usebenzisa umatshini efanayo kunye uqwalaselo ngamnye ikhethwayo oluthile. Ngoko umsebenzisi ngamnye alobe iprofayile yakho uze ufunde xa usebenzisa AutoCAD. Kunye 2) Ngale amashiya unako ukubuyela AutoCAD zonke iparameters yayo yoqobo, yena ukuba wenze naluphi na utshintsho.
Post edlulileyo«Edlulileyo Iifayile zee-2.11
Post Next 2.12.1 Iinguqu ezininzi kwi-interfaceOkulandelayo "